5 Mienzaniso yeEpit-Intent Pop-ups Iyo Inovandudza Yako Shanduko Mitengo | Martech Zone
5 Mienzaniso yeEpit-Intent Pop-ups Iyo Inovandudza Yako Shanduko Mitengo
Muvhuro, July 20, 2020 Muvhuro, July 20, 2020 Ugljesa Djuric
Kana iwe uchimhanyisa bhizinesi, iwe unoziva kuti kuburitsa nzira nyowani uye dzinoshanda dzekuvandudza kutendeuka kwehuwandu nderimwe remabasa akakosha.
Pamwe iwe hauzvione nenzira iyoyo pakutanga, asi kubuda-chinangwa pop-ups kungave iri chaiyo mhinduro yauri kutsvaga.
Nei zvakadaro uye nemabatiro aunofanira kuita iwe kumberi, iwe uchaona mune sekondi.
Ndezvipi Exit-Chinangwa Pop-ups?
Kune akawanda marudzi akasiyana epop-up windows, asi aya ndiwo mamwe anonyanya kushandiswa:
Chimwe nechimwe chazvo chine zvazvakanakira, asi ikozvino isu ticha tsanangura kuti nei mabudiro-enji pop-ups aine mukana wakakura chaizvo wekutora bhizinesi rako padanho repamusoro rebudiriro.
Exit-chinangwa pop-ups ari, sekureva kwezita pacharo, windows dzinoonekwa kana mushanyi achida kubuda pawebhusaiti.
Nguva pfupi mushanyi asati anongedzera kubhatani rekuvhara iyo browser reti kana hwindo, iyo yekubuda pop-up hwindo rinowoneka. Inopa kumwe kupihwa kusingadzivisike kunobata kutarisisa kwemushanyi uye kunomukurudzira kutora matanho.
Aya pop-ups anoshanda anoenderana nehungwaru kubuda-chinangwa tekinoroji inoona yekubuda chinangwa uye inokonzeresa pop-up.
Uye nei ivo vachikosha kwazvo?
Izvo zvakakosha nekuti iwe unogona kuzvishandisa kudzivirira kusunungura anotevera mukana mutengi!
Nekuratidza zvimwe zvakakosha zvinopihwa, vanhu vanogona kutanga kushandura pfungwa dzavo uye kunyatso zadzisa chinangwa iwe chawakaisa.
Kunyangwe kupihwa uku kuri kweimwe nhau dzinonakidza dzavanogona kuwana kuburikidza neyako email mushandirapamwe kana mutengo wekutenga nekukasira, unogona kuyedza uye kugutsa vanhu kuti vazvigamuchire.
Ehe, pane zvimwe zvinhu zvaunofanirwa kuita senge:
Dhizaini inoratidzika inoratidzika
Neuchenjeri akaisa chipo
Kusanganisira CTA (kufona-ku-kuita) bhatani
Izvi zvinogona kutaridzika kunge zvinhu zvakawanda zvekufunga nezvazvo, asi isu tinokuratidza akati wandei enzira dzakanakisa dzaunoda kutevedzera nekushandisa zvinoenderana newebsite yako uye bhizinesi rako mukati.
Maitiro akanakisa ekubuda-chinangwa pop-ups
Kuti tinzwisise kubuda-kwekuda pop-ups maitiro zviri nani, isu tichavafungidzira ivo vachishandisa yakakodzera mienzaniso kubva akasiyana akabudirira mawebhusaiti.
Muenzaniso 1: Govera zvakakosha zvemukati
Kupa zvidimbu zvakakosha zvemukati inogara iri zano rakanaka. Kana iwe uchiziva rako rakanangwa boka, unogona kugadzirira zvemukati izvo zvinonakidza ivo.
Izvi zvinogona kuva:
Zvingave zviri nyore kwazvo kuti iwe ugadzire isinga gadziriswe mushure mekunyatso nyatsoongorora zvido zvevanhu zvaunoda kushandura kuva vatengi vechigadzirwa chako kana sevhisi.
Nekutsinhana, ivo vanofara kusiya email yavo kuonana nekuti "mutengo wakaderera chaizvo".
Mushure mekunhonga shamwari uye wobva wawedzera kune yako tsamba yekutumira, iwe unogona kuparadzira chiziviso chekuziva uye nekutaurirana nevatengi vako vemangwana.
Asi usakanganwa kuti iwe unofanirwa kuzadzisa zvinotarisirwa, zvikasadaro, vako vanonyorera vanozopedzisira vaodzwa mwoyo uye havazodzoke kumashure.
Varatidze kuti kuvimba newe kwakaruramiswa zvachose.
Heino muenzaniso kubva Chirongwa:
Chirevo: Coschedule inogadzira iyo inobuda pop-up hwindo uko vashanyi vanogona kutora zvimwe zvakakosha zvemukati. Sekuona kwedu, ivo zvakare vakangwara vakataura kuti vanopa zvese karenda uye e-bhuku, uye iwe unongoda kubaya pane Tora izvezvi bhatani kuti ugamuchire.
Design: Dhizaini dhizaini, asi iine mavara akajeka anokwezva kutariswa. Mifananidzo iri pamusoro pechinyorwa chiratidzo chekuti zvirimo zvakavamirira, ndiko kuti, kusimbiswa kwavo.
Kopa: Mukukurukurirana mhenyu, Usati waenda… inosundira vanhu kuti vamire vatendeuke vasati vanyatsoenda, uye izvo zvinoshandiswa zvine hungwaru mune ino yekubuda-chinangwa pop-up futi.
Offer: Chipo chinoratidzika kunge chinokoka. Kusanganisira mazwi urongwa uye Kuronga inobatsira kusanganisa iyo yese kupa pamwe zvirinani kugadzirwa uye nguva kushanda.
Semuenzaniso 2: Govera Rarama Demo
Demo inzira yakanaka yekuonana nevashanyi vako.
Pamwe chikuva chako chinoita senge chakaomarara uye ndicho chikonzero nei mushanyi achida kubuda pawebhusaiti yako.
Kana iwe ukapa imwe sevhisi, iwe unozogona kutsanangura zviri nyore kwazvo kuti ingashandiswe sei, ndeapi mabhenefiti, uye akafanana.
Demo mhenyu isarudzo iri nani nekuti zvese zvinoitika mune chaiyo-nguva uye vanogona kutenga vanogona kuona zvese zvinogadziridzwa nenhau.
Tarisa kuti sei Zendesk vakashandisa izvi muhwindo ravo rekubuda-rekuda kubuda-kumusoro:
Chirevo: Sezvo Zendesk iri mutengi inotsigira tikiti software, iyi pop-up inzira huru yekuita nevanogona vatengi uye kutanga kutaurirana.
Design: Chinhu chevanhu chakabatanidzwa, icho chinobatsira vanhu kubatana nebhizinesi rako.
Offer: Demo chikumbiro chikuru nekuti chikuva ichi chinovimbisa mhinduro inozokubatsira nekumhanyisa bhizinesi rako zvirinani. Uye, zvakanyanya kukosha, chivimbiso chavo chinotanga kuzadzisa panguva chaiyo, unotanga kugamuchira rubatsiro nekukasira.
Kopa: Iyi kopi ine toni-inodziya-moyo iyo yakanaka pakuvaka kwakasimba kubatana nevatengi. Kune rimwe divi, kana iwe uine mamwe mapeji ari iri kuvakwa, haufanire kumirira kuti uzvipedze kuti utange kuwana vatengi uye zvinotungamira kubva kwazviri.
Iwe unogona zvakare kuisa ako popups pane iyo kuuya manje manje mapeji uye tanga kuwedzera yako yekutengesa fanera.
Muenzaniso 3: Taura Kutakura Mahara
Kutakura kwemahara kunonzwika seshoko remashiripiti kune mumwe munhu anoda kutenga kubva kwauri.
Iwe unofanirwa kuziva kuti vanhu havadi kubhadhara kune chero divi mari. Ivo vangatoda kubhadhara zvakanyanya kune chimwe chinhu pane kubhadhara imwe mari yekutumira.
Kana iwe usingakwanise kudzikisa mari yekutumira, zvirinani kuzviisa mumutengo wekutanga pane kuzviisa kuchitoro chako zvakasiyana.
Nekudaro, kana iwe uchikwanisa kupa vatengi vako kutumira kwemahara, iwe unofanirwa kunyatso kuzviita. Kutengesa kwako kunotanga kuwedzera munguva pfupi.
Heino muenzaniso kubva Brooklinen:
Chirevo: Brooklinen ikambani inotengesa machira, saka hazvishamise kuti isu tinogona kuona mamwe emabhedha emabhedha akasununguka mune yekubuda-chinangwa pop-up.
Design: Muchena mutsvuku, mavara madema. Asi, zviri nyore chaizvo here? Mahwendefa ari kumashure mufananidzo ari chaizvo anotaridzika saizvozvi nemaune. Vanotaridzika kunge munhu achangomuka pamubhedha unodziya. Zvakafanana nekuti ivo vari kuyedza kutinyengerera kuti titenge machira akasununguka, izvo zviri kuyedza, kunyanya kana iwe watonzwa kuneta apo pop-up iyi yairatidza.
Offer: Chipo chiri pachena zvakajeka uye chinoshanda zvakanyanya.
Kopa: Hapana mazwi asina basa, akachena uye akajeka kopi.
Muenzaniso 4: Shevedza vanhu kuti vanyore tsamba yemutsamba
Tsamba yenhau irimo yezvakakosha zvemukati, kunyanya kana iwe ukagadzira yakanaka apo vanhu vanogona kunyatso ziviswa nezvezvakakosha zvinhu uye vasinganzwe sekunge vari kusundidzirwa kutenga chimwe chinhu kubva kwauri.
Iko inokutendera iwe kuti ugare wakabatana nevatengi vako.
Kumhanyisa matsamba enhau zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuenderana kuitira kuti vazive chaizvo nguva yekutarisira ruzivo rutsva kubva kwauri.
Heino nzira GQ yakazadzisa izvi pane yavo pop-up hwindo:
Chirevo: GQ magazini yemurume inovhara mararamiro, fashoni, mafambiro, uye zvimwe.
Design: Zvekare, chinhu chevanhu chakabatanidzwa. Kuseka kudiki mumufananidzo uye zvimwe zvese zvepop-up zviri nyore, izvo zvinoita musanganiswa mukuru.
Offer: Ivo vanopa matipi uye manomano anogona kubatsira varume kuti vataridzike, uye chinhu chega chavanofanira kuita kusiya kutaurirana kwavo.
Kopa: Chikamu chakakosha chakasimbiswa, saka vashanyi havatombofaniri kuverenga chero chinhu kunze kwemavara akanyorwa mune hombe font, sezvo ichipa ruzivo rwakakwana.
Muenzaniso 5: Govera Discount
Discounts inogara ichikurudzira. Kana iwe ukavawedzera ivo kuti vabude-vavariro pop-ups, ivo vanogona kuve neyakakura kukanganisa kune yako mari.
Iyo yakakwira sei iyo dhisikaundi ichave, zvinoenderana chete newe Kunyangwe zvidiki zvinokurudzira zvinogona kuwedzera zvakanyanya huwandu hwekutengesa.
Zvimwe zvitoro zvinopa zvikwereti nguva dzose nekuti zvakazove tsika ine simba chaizvo.
Kunyangwe hombe uye dzakakurumbira mawebhusaiti senge Shandura shandisa kupa zvinodzikisira senzira yekukwezva vashanyi.
Chirevo: Revolve webhusaiti yehembe ine sarudzo hombe yezvigadzirwa, saka kupa mutero kunogona kukurudzira vanhu kuti vatenge zvimwe nechinangwa chekuchengetedza mari chaizvo.
Design: Tinogona kuona kuti kuwedzera chinhu chevanhu chiitiko chakajairika futi. Iyi pop-up ine yakasarudzika dhizaini ine musiyano weCTA bhatani.
Offer: Ivo vanopa 10% dhisikaundi uye vanokubatsira iwe kuchengetedza imwe nguva nekusarudza chimwe chezvikamu zvitatu zvakapihwa.
Kopa: Kutaurisa kwakananga inzira ine simba yekukwezva vatengi kutarisisa.
Sezvauri kuona, pane akawanda mazano ekuti ungashandise sei kubuda-chinangwa pop-ups kune yako mukana uye kuvaka kuvimba nevatengi vako.
Iwe unogona kutamba neyakagadzirwa, kuteedzera, uye kusanganisira akasiyana zvipo zvinokwezva kutarisisa kwevashanyi vako uye kuwedzera shanduko dzako.
Ichokwadi kuedza kushoma kana tichienzanisa neizvo rudzi urwu rwe pop-up runogona kuitira bhizinesi rako.
Zvitende kana kuti kwete, kuzvishandisa kunogona kutove nyore nekuti nhasi kune maturusi anogona kukubatsira kuti ugadzire pop-up inoshanda mune isingasviki maminetsi mashanu.
Kune zvishandiso zvakawanda senge Privy uye 'nzira dzayo izvo zvinokubatsira iwe kugadzira yako wega webhusaiti popups. Nekudhonza uye kudonhedza mupepeti uye sarudzo dzekugadzirisa, zvinoshamisa pop-ups zvichave zvakagadzirira kuitiswa.
Shandisa zviitwa izvi paunenge uchigadzira pop-ups uye uone kuti ndeipi inoshandura yakanakira iwe!
Tags: kudana-ku-kuitatinya popupmwero wekushandurwakupinda pop-upkupinda popupkubuda chinangwakubuda chinangwa pop-upkubuda-chinangwa popuppop-up dhizainipop-up chipobudapopup inopaMupumburu abudascroll popupyakamisikidzwa pop-uptimed popup